» मेयर र उपमेयर कप क्रिकेट हुँदै
मेयर र उपमेयर कप क्रिकेट हुँदै
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ११:३०
फागुन ११, बैतडी– बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा चौथो संस्करणको मेयर र उपमेयर कप टि ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता यही फागुन १८ गतेदेखि सञ्चालन हुनेछ भने उपमेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता अगामी चैत १ गतेदेखि हुने जनाइएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकाको सहयोग तथा नगर क्रिकेट समितिको आयोजनामा सञ्चालन हुने दुवै प्रतियोगितामा नगरका ११ वटै वडाको सहभागिता रहनेछ ।
प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेल सुन्दरखाली खेल मैदानमा सञ्चालन हुने नगर क्रिकेट समितिका संयोजक रमेश भट्टले जानकारी दिए। मेयर कप क्रिकेटको प्रथम पुरस्कार रु ७५ हजार र द्वितीय रु ५० हजार रहेको छ । उपमेयर क्रिकेटको विजेता टोलीले रु ४५ हजार र उपविजेताले रु ३० हजार पुरस्कार पाउने नगर क्रिकेट समितिले जनाएको छ ।
क्रिकेट विकासका लागि दशरथचन्द नगरपालिकाले क्रिकेट प्रतियोगितालाई नगरपालिकाको कार्यक्रममै समावेश गरेको नगरप्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले जानकारी दिए । प्रतियोगिताले महिला तथा पुरुष खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले बताए ।
मेरो ज्यान तलमाथी भइहाल्यो भने अन्यथा नमान्नुहोला – प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जानेको, सकेको गर भन्न मिल्दैनः डा. भट्टराई
सडक विस्तारको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशन
प्रचण्ड–माधव समूहले स्थायी र केन्द्रीय कमिटि बैठक तत्कालै बोलाउने
सुनको मूल्य बढ्यो, तोलामा कति ?
बाबुराम भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको पुष्टि, मंगलबार फर्कने
प्रतिनिधिसभा अधिवेशन फागुन २३ गते बोलाउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस
आज प्रधानमन्त्री ओली पोखरा जाँदै